Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha zaseHawaii » Izivakashi eziya eHawaii: Sifuna ukubona kancane kini
Ithuthukiswe ngabahlali base-Oahu, futhi ngokubambisana neDolobha kanye ne-County of Honolulu kanye ne-Oahu Visitors Bureau (OVB), i-Oahu Destination Management Action Plan (DMAP) ikhomba izindawo ezinesidingo kanye nezixazululo zokuthuthukisa ikhwalithi yabahlali impilo nokwenza ngcono isivakashi. Into yokuqala kuhlelo ukwehlisa inani eliphelele lezivakashi. Ezokuvakasha zingumshayeli womnotho omkhulu kunayo yonke waseHawaii futhi zisakazeka ngaphezu kwezinye izimboni ezinjengesevisi, ezokuthutha, kanye nokuthengisa.
Impendulo yomphakathi iqoqwe ngesikhathi sesethulo esibonakalayo kanye nefomu lokufaka eliku-inthanethi.
I-Hawaii Tourism Authority (HTA) ishicilele i-2021-2024 DMAP, umhlahlandlela wokwakha kabusha, ukuchaza kabusha nokusetha kabusha umkhombandlela wezokuvakasha e-Oahu.
Uhlelo olususelwe emphakathini luyingxenye yomsebenzi we-HTA obheke eMalama Kuu Home (ukunakekela ikhaya lami engilithandayo) kanye nemizamo yalo esheshayo yokuphatha ezokuvakasha ngendlela yokuzivuselela.
"Siyababonga abahlali base-Oahu ababambe iqhaza kwinqubo ye-DMAP futhi banikela ngothando lwabo ngemibono yabo eyahlukahlukene, baxoxa ngezinselelo ezahlukahlukene ezihlobene nezokuvakasha ezindaweni zabo futhi basiza ukwenza uhlelo olusebenzayo oludingekayo enhlalakahleni yomphakathi," kusho uJohn De Fries , Umongameli we-HTA kanye ne-CEO. "Kumayelana nokubambisana okuqhubekayo nokuqhubekela phambili ndawonye siye emaholweni kule ndawo ethandekayo nakomunye nomunye, njengokufiswa ngabantu base-Oahu."
I-DMAP igxile ezenzweni ezibalulekile umphakathi, imboni yezivakashi neminye imikhakha ezibona zidingeka esikhathini esiyiminyaka emithathu. Isisekelo se-Oahu DMAP sisekelwe ku- Uhlelo Lokusebenza Lwe-HTA luka-2020-2025, futhi izenzo zincike ezinsikeni ezine zokuxhumana - Izinsiza Zemvelo, Amasiko WaseHawaii, Umphakathi kanye Nokumaketha Komkhiqizo.
“I-Oahu yindawo ekhethekile futhi igqame kunoma ikuphi emhlabeni ngenxa yobuhle bayo bemvelo kanye nabantu bayo abaphawulekayo. Ngokusebenza ngokubambisana njengomphakathi ukunakekela izinsiza zethu, senza indawo lapho isiko lethu, umhlaba wethu namanzi, umnotho wethu, kanye nobudlelwano bethu kungachuma khona, ”kusho iMeya uRick Blangiardi.
Uqhubeke wathi, "Ngokusebenzisana neHawaii Tourism Authority ku-Oahu's Destination Management Action Plan, iDolobha kanye ne-County of Honolulu kuzogxilwa kuzinto ezintathu eziseqhulwini emphakathini: Vikela amasayithi ethu athandwa kakhulu futhi uphathe isipiliyoni sanoma ngubani obavakashelayo, nciphisa okufushane -ukuqasha isikhathi eside ukubhekela izindawo eziklanyiwe, futhi kwandise ukusetshenziswa kwezindlela zokuhamba ezihlobene nezivakashi ezisimeme. ”
Izenzo ezilandelayo zenziwe yikomidi eliholayo lase-Oahu, eliqukethe izakhamizi ezimele imiphakathi ezihlala kuyo, kanye umkhakha wezivakashi, imikhakha ehlukene yamabhizinisi, nezinhlangano ezingenzi nzuzo, ngokufaka komphakathi. Abamele iDolobha kanye nesiFunda saseHonolulu, i-HTA ne-OVB nabo bahlinzeka ngemvo kulo lonke lolu hlelo.
Nciphisa inani eliphelele lezivakashi eziya e-Oahu ziye ezingeni elilawulekayo ngokulawula inani lezindawo zokuhlala zezivakashi nokuhlola ushintsho ekusetshenzisweni komhlaba, ekuklanyweni komhlaba nakwinqubomgomo yezindiza.
Qalisa uhlelo lwezokuxhumana lwezokuvakasha lwangaphambi nangemuva kokukhuthaza ukuziphatha okunenhlonipho nokweseka.
Khomba amasayithi futhi usebenzise amasu okuphatha abaphathi abakhulu bendawo e-Oahu.
Khulisa ukuphoqelelwa nokuphathwa okusebenzayo kwamasayithi nemizila.
Thuthukisa uhlelo lokubhuka lokuqapha nokuphatha abasebenzisi ezindaweni zemvelo nakwezamasiko.
Sungula "Imali Yokuvakasha Ezivuselelayo" esekela ngqo izinhlelo zokuvuselela izinsizakusebenza zaseHawaii, ukuvikela izinsiza zemvelo, kanye nokubhekana nezikweletu zokonga ezingasekelwa ngezimali.
Sungula futhi usebenzise izinhlelo zokumaketha ukuheha izihambi ezinomthelela omuhle ezibeka phambili imvelo, isiko nokutshala imali emphakathini wethu wendawo.
Qhubeka nokuthuthukisa futhi usebenzise izinhlelo ze- “Thenga Ezasekhaya” ukukhuthaza ukuthengwa kwemikhiqizo yendawo kanye nezinsizakalo zokugcina izimali emiphakathini yethu futhi kunciphise okwenzeka ekhabhoni.
Phatha ukusetshenziswa kwezivakashi njengezimoto zokuhamba e-Oahu.
Sebenza nabalingani bomphakathi ukuthuthukisa, ukumaketha, ukukhuthaza, nokuxhasa okwengeziwe kokusebenzisana, okuhlangenwe nakho okukhethiwe okunothisa abahlali nezivakashi ngokufanayo.
Okthoba 21, 2021 ku-01: 36